europeantravel Archives | एक ट्रेन सेव
घर > यूरोपेन्ट्रावेल
पढ्ने समय:6मिनेट समय अन्त आएको छ – चाहे तिमी सिर्फ विश्वविद्यालय स्नातक गर्नुभएको, आफ्नो वार्षिक छुट्टी को लागि बाहिर शीर्षक छन्, वा भूमि यात्रा आकर्षणलाई छुटेका सकिँदैन भनेर निर्णय गरेका छौं, तपाईं रेल द्वारा युरोप यात्रा गर्न रोजेका. यो रोमान्टिक विचार छ, एक ट्रेक द्वारा यात्रा…
पढ्ने समय:3मिनेट पेरिस गर्न हिउँदमा रेल यात्रा धेरै भत्तों आउँछ. सबै भन्दा पहिले, यो यात्रा गर्न सबैभन्दा सहज बाटो हो. को सिट विशाल छन्, तपाईं एक विमान मा हुनेछ तपाईं भन्दा बढी legroom अनुमति. रेलबाट जान पनि एक सुरक्षित मार्ग हो…
पढ्ने समय:4मिनेट त्यहाँ अर्को बिहान एक बिस्तारै सार्ने रेल मा सुतेको झर्ने र आफ्नो गन्तव्य मा उठ्दै भन्दा कुनै राम्रो भावना छ, को ढलान बाट मात्र मिनेट. यूरोपमा, रेलबाट यात्रा गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्टहरू खोज्दा हामी छनौटको लागि खराब गर्दछौं. होइन…
पढ्ने समय:4मिनेट ब्याकस्पेसिङ यात्रा गर्न सबैभन्दा रोचक तरिका छ, र राम्रो कारण लागि. आफ्नो पछाडि आफ्नो सबै सम्पत्तिमाथि भइरहेको र देश तालिम रेल र देशबाट hopping को स्वतन्त्रता एक अविश्वसनीय अनुभव छ. यो देखि यति लोकप्रिय भएको छ, हामी…
पढ्ने समय:3मिनेट कुनै बखत, बजेट गन्तव्यहरू छान्ने भूमिका खेल्न गर्नुभयो जब (वा कम से कम, भूमिका को रूपमा ठूलो छैन!) कुरा सजिलो थिए; आजभोलि, हामी यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी चलाउने तरिकाले चलाख हुनुपर्दछ…